I-Diamond Grinding Wheel, CBN Ukugaya Wheel, CNC Machining Centres- Jinyunxiang
amadayimane okugaya ama-carbide abukhali abona ama-blades
Isondo ledayimane ne-CBN lomsiki we-carbide milling cutter
amadayimane okugaya amadayimane okubukisisa amathuluzi we-carbide
idayimane le-CBN yokugaya isondo i-bi-iron band yabona
Umshini wesandla wedayimane wokugaya isondo
Isondo ledayimane lokugaya elingaphandle
SINIKELELA ISIQINISO ESIQINILE
Amasondo we-Hybrid bond egaya amasondo e-CNC HSS thuluzi fl ...
Izici: 1. Ukuzwela okuhle kakhulu, kulula ukubuyisa futhi ukubuyisela emuva ngesikhathi sokusebenzisa akunasidingo 2. Kuqinisekisa ukunemba okukhulu kokuqedelwa komhlaba. 3. Ucezu lomsebenzi ngeke lushiswe. 4. Amasondo angasebenza ezimeni ezingejwayelekile. Amasondo ethu we-resin bond nedayimane le-CBN atholakala efulethini, embozwe inkomishi, obunjwe ngesitsha, nokwakheka kwesilinda. Le mikhiqizo enobuhlakani obusetshenzisiwe ingahle isetshenziselwe ukucija izisiki ezintweni ezahlukahlukene, ukufaka izingxenye zekhamisi, ukusika i-quartz nengilazi, ukuphela kokugaya ...
I-grinding Wheel isethi yezikhungo zeMachining ze-CNC
IMINININGWANE YOKUGCINWA KWESITOLO kusebenza okuphezulu kokugaya umtshingo ngomugqa womkhiqizo. Ukucaciswa okusha kufaka amandla amancane okugaya kanye namanani aphezulu wokukhishwa kwesitoko ngokugqoka okuncane. amathuluzi okugaya aqinisekisa ukunemba okukhulu kwamathuluzi akho nokuqedwa komhlaba okuphelele. Lokhu konke kuphansi kwekhwalithi yedayimane eyenziwe ngokulandelana. Amathuluzi okusika i-Flute ukugaya kwe-TC kanye namathuluzi okusika we-HSS ukusebenza okuphezulu kokugaya kwamathuluzi we-tungsten carbide shaft Amandla aphansi wokugaya 1.Ukuhlanganiswa kwe-pr ...
amadayimane wokugaya amadayimane wokuinza okuhlukahlukene ...
I-Resin bond diamond wheel gaye isondo isetshenziswa kabanzi ekugayeni kwe-tungsten carbide isiyingi se-saw. Umphetho wokugaya ubushelelezi, futhi ubukhali futhi unempilo ende yokusebenza. I-Resin bond diamond liling wheel isetshenziswa ekubonisweni kwesikrini esikhundleni sokufaka ukukhishwa kwendabuko kwamahhala kwendabuko. Ingathuthukisa ukusebenza kahle kwesikrini sokubonisa nekhwalithi ephezulu, futhi inciphise izindleko.Inesilinganiso sokususa okuphezulu kwezinto ezibonakalayo nokuqina kwendawo okuhle. Isondo lokugaya idayimane ...
amadayimane okugaya amadayimane e-TCT carbide abona ...
Esetshenziselwa ikakhulukazi ukugaya ubuso emshinini we-CNC we-TCT wabona amabala, amasondo okugaya amadayimani okubukisisa i-carbide abona amabala, amasondo edayimane wokugaya ukuze kucijiswe amathuluzi e-carbide, anjengeVollmer, Abm, Rekord..Grit iyahlukahluka ngokusho kwesicelo. Akunandaba nokwenza ama-saw amasha amasha (i-Saw Blade for Plate processing, Saw Blade for Wood Solid ， Saw Blade For Aluminium, Saw Blade For Special) noma kabusha, imikhiqizo yethu yamukelwa kahle. Kunezingxenye ezintathu okudingeka zibekwe phansi zamazinyo ...
idayimane lokugaya i-cbn le-Carbide R ...
Izicelo zamasondo okugaya ama-resin bond diamond grinding wheel Amasondo edayimane edayimane asetshenziselwa amathuluzi e-carbide e-tungsten, ingilazi yezimoto, i-PDC, i-PCD, i-PCBN, i-ceramics, isafire, ingilazi ye-optical, kanye nezinto ezisetshenziswa ngozibuthe. Isondo lokugaya idayimane lesigaxa se-bond lifaka amandla amancane okugaya, ukushisa okuncane kokugaya, ukuzilolisisa okuhle, ukusebenza kahle okukhulu, kanye nokuqedwa komhlaba okuphezulu. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukusika, ukuqeda ukugaya, ukugaya, ukuqeda, kanye nokugoba. Kusetshenziswe kabanzi ukucubungula i-ce eyigugu ...
I-Woodworking Tooling, iDayimane ne-CBN Grinding W ...
Amasondo abantu abasebenza ngokugawula izinkuni I-matrix eyinhlanganisela ingakuqinisekisa ukufakwa ngokuqinile nokushiswa kwe-shock ikakhulukazi esetshenziselwa ukugaya abagawuli bokhuni. Isondo lokugaya lamaShayina lithandwa kakhulu phakathi kwamakhasimende asekhaya nasekhaya phesheya ngekhwalithi ephezulu kanye nokuncintisana kwentengo.Igama liyahlukahluka ngokusho kwesicelo. I-Diamond Grinding Wheel Cup Tool Cutter Grinder Yokwenza kahle kweCarbide Metal High, ukusetshenziswa kweSondo lokugiya kuhamba kancane; Ukuzilola okuhle, ukugaya okushisa okuncane, okulula ukusixhuma, ...
Isondo lokugaya idayimane le-carbide / Round Edge D ...
IDayimane iyinto enzima kunazo zonke emhlabeni. Ubulukhuni bayo, ukugqokwa kwayo kanye nokumelana kwayo nokushisa okwenze idayimani laba yikhona okulimaza kakhulu imishini yokwenza izinto ezinjengalezi: * Imatern Hard * Tungsten Carbide * Izinto ze-Ceramic * Izinto zeMagnetic * Izinto zeSilicon * Izinto zokufafaza ukushisa ezinamandla * I-Polycrystalline idayimane ne-CBN izikhala zedayimane lokugaya lihlanganisa : I-Resin bond yedayimane yokugaya isondo I-Vitrified / Ceramic diamond grinding wheel Isondo le-Metal bond yedayimane lokugaya. Uma wenza ...
Umshini wokugaya umshini wedayimane we-grindin ...
Lolu hlobo lwesondo lokugaya lilungele ukusetshenziswa komshini wokugaya ama-semi-automatic saw, olungele amafektri wefenisha noma abakhiqizi abasebenza ekusebenzeni kwangaphandle kwama-alloy saw blade. Amasondo edayimane anama-Bakelite Body Diamond wheel elinomzimba we-Bakelite onobuhle obuhle, asetshenziswa embonini yokwenza izinkuni, ukusikwa kwamahhala nempilo ende Isondo leDayimane ngomzimba weBakelite wokugaya nge-cylindrical, i-elasticity, sharpness kanye nokunemba kwe-4 inch yedayimane okwenziwe ngalo ...
IShijiazhuang Jinyunxiang Technology Co, Ltd. ikhethekile ngamasondo e-resin-bonded and super hard material namasondo okugaya ama-CBN. Ekuthuthukisweni kweminyaka eyishumi, saba ngumholi wemishini yokugaya amasondo. Imikhiqizo isetshenziswa kabanzi emigqeni yokukhiqiza yamakhulu ezinkampani ezifuywayo nezaphesheya. Ngokusekelwe ekuphathweni kokwethembeka, ukugcina ukholo, ukucaca, ingunaphakade, singathanda ukunikela ngemikhiqizo esebenza kahle, engaguquki futhi efanelekayo.
Amasondo edayimane ahlukaniswa ngobumba, i-resin, i-iron singing, i-electroplating, brazing, njll.
1. I-Resin bond grinding wheel: Ukuzilolonga okuhle, akulula ukusivimba, kuvumelana nezimo, nokugquma okuhle, kepha isidumbu se-bond sinamandla amabi, ukubambeka kabi kwedayimane lesidumbu, ukumelana nokushisa okungekuhle nokumelana nokugqokwa, ngakho-ke akukhona ilungele isondo lokugaya elilukhuni, alilungele isisindo esisebenza kanzima ...
Isondo lokugaya elingenasisekelo
Ukugaya okungenamkhawulo yinqubo yokugaya ye-OD (ububanzi obungaphandle). Isondo lokugaya elingenasisekelo lisetshenziselwa ukugaya i-peripheral of workpieces. Uhlobo: 1A1, 6A1, 9A1 Isicelo: Imigoqo ye-carbide eyenziwe usimende, iPolycrystallin 1.Product Igama: I-Diamond Centerless Grinding Wheel, Isondo lokugaya iDayimane, Resin Diamo ...
Izicelo ezahlukahlukene zesondo lokugaya
Amasondo edayimane / i-CBN ye-CNC Grinder Resin bond, ikhwalithi ephezulu kakhulu, ubuchwepheshe obukhethekile, obusetshenziswa kuma-5-axis ama-CNC grinders wokugaya i-tungsten carbide noma amathuluzi we-HSS alloy iron Amathuluzi edayimane / i-CBN Wheel yeProfayili yokuGaya Iphrofayili yedayimane namasondo e-CBN ngezinto ezahlukahlukene njenge-hard lukhuni ...
Isondo lokugaya: Ubukhulu: 100 * 20 * 16100 * 30 * 16 Material: I-CBN log ibone blade ngemuva kokuthi ifakwe isondo lokugaya elikhiqizwe yinkampani, ingafinyelela ukunemba okuphezulu. Ngakho-ke, ngemuva kokusika, umqulu wephepha awunamaphethelo amabi, izibazi kanye nomnyama omnyama. inikeza ama-blade okulandelayo ku ...
Wabona ukugaya kwe-blade
Ngokuthandwa kwemishini eminingi ye-blade saw, ikhwalithi ye-saw ibathinta ngqo ukusebenza kahle kokusebenza kanye nezindleko zokukhiqiza zokubona. Ngesikhathi sokusetshenziswa kwe-saw blade, ikhwalithi yokugaya izophazamisa ikhwalithi ye-saw saw futhi. Ukubaluleka kwaso kuyabonakala. Esikhathini ...
Cha. 115, Tabei Road, Yuhua Distrcit, Shijiazhuang City, Hebei Province
Igobolondo eluhlaza okwesibhakabhaka elibukhali, I-Diamond / Cbn clearance i-Angle Grinding Wheel YeThuluzi Lokugaya, Ukugaya Wheel Yamathuluzi E-Carbide, I-Carbide Circular Saw Blade Yokusika Kwensimbi, I-5inch Resin Ehlanganisiwe Yesondo Yokugaya Yokubhoboza Amathuluzi E-Carbide I-Disc, Amasondo Okugaya iDayimane YeTungsten Carbide,